Uqikelelo luka-2014 lomxholo geofumed: UPaul Ramsey -Geofumed
Ikhaya/Geospatial - GIS/Izibikezelo ze-2014 zesimo se-geofumed: uPaul Ramsey
Ukuqala ngoJanuwari, uPaul Ramsey ukhuphe ukuqikelela kwakhe kulo nyaka kwicandelo le-geospatial; Ukuthathela ingqalelo ukuba ngumntu obekhona kule ndawo iminyaka engaphezulu kwe-10 kwaye kuthi, ngenxa yegalelo lakhe ukuvula isoftware, wafumana i-Sol Katz Award evela kwi-OSGeo Foundation kwi-2008, siyizisa ngenguqulelo eguqulweyo.
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, xa i-PostGIS yayiyinguqulelo nje engu-0.8, umhlaba wawusentsha kwaye umtsha, ndandiqinisekile ukuba ishishini lethu likwincopho yotshintsho oluvulekileyo lomthombo. Xa abantu bekwazile ukuzama izixhobo ezintsha, eziguqukayo, ezitsha zeenkqubo zokwakha, ngokwendalo balahla isoftware yabo yakudala kwaye ngokukhawuleza baqala ukuya kubomi obukhanyiselweyo. Ndandinemincili, ndaziva igeofumato yento ezayo.
Kwaye rhoqo, phantse minyaka yonke ukususela ngo-2000 umntu wavakalisa, kwindawo ethile, ngomphefumlo wabo wonke ukuba (ekugqibeleni) "kulo nyaka iya kuba ngunyaka wedesktop yeLinux".
Kwenzeka into engaqhelekanga apha kwindlela evulekileyo yomthombo. Kwavela okungaphezulu koko. Ngokubanzi, utshintsho belucotha, kancinci kancinci, kodwa luhlala lujolise kwimeko evulekileyo yokusebenzisa imithombo.
Ke, ndilindele into enokwenzeka kunyaka omtsha wehlabathi elivulekileyo lomthombo we-geospatial, uqikelelo lwam lungangabinangqondo - izinto ezinkulu ziya kutshintsha zincinci, kodwa kwimida siya kuba neenguqu ezibalulekileyo:
I-Oracle iya kubhengeza ukuba balahlekelwa ngabathengi kwi-PostgreSQL. Nangona i-MySQL isoloko ikwimidiya njenge "database yomthombo ovulekileyo", ibe yi-PostgreSQL enobuchule beshishini ukusuka ekuqaleni ukuya kunye namakhwenkwe amakhulu. Njengoko i-Oracle iqhubeka nokunyusa amaxabiso okulungisa ukukholisa iWall Street, abathengi baqala ukucinga ngokungenakucingelwa: mhlawumbi lixesha lokuba uvuselele umgangatho wakho wokugcina.
Eyona ipholileyo iya kuqhubeka nomthombo ovulekileyo kwiziseko. Nokuba iyasebenza kwiLinux, amandla e-GDAL anemifanekiso yesathelayithi evela kwiPlanethiLabs, okanye iitafile zamva nje ze-Android, eyona nto ipholileyo iya kuba semagxeni omthombo ovulekileyo kwaye enye iyinzuzo.
I-PaaS iya kujoyina umthombo ovulekileyo kwindaleko yendalo. Kwaye ekubeni ndisazi iqonga njengenkonzo (PaaS), ndiyabona ukuba inesithembiso somthombo ovulekileyo kunye nejika elifanayo lokufunda. Ngenxa yoko, izinto ziya kuwela phantsi kobunzima bazo, ngokuthe ngcembe ziya kudityaniswa kumbindi we-IT, nangona thina banamava siya kuyifumana kwaye isizukulwana esilandelayo siya kuhamba kwimisebenzi yokusebenza. Kwaye ekubeni iPaaS inguMthombo ovulekileyo ngokwenkcazo, ukukhula kwilifu kunye nezinto zokwakha iinkqubo ziya kuhlala kwaye imithombo evulekileyo iya kuphuculwa.
Uphuhliso lwesitayile somthombo ovulekileyo oluphindaphindayo luya kufumana umhlaba omninzi. Ukungaphumeleli koluntu kwendawo ye-healthcare.gov kunye ne-cascading ye-methodology inokulunga kuphuhliso olulungileyo. Sele kukho izakhono ezininzi kwiinkampani, kodwa kuseyinto eyenziwa yimibutho "eqhubela phambili" kuphela, ayiyinto eqhelekileyo. Okukhona abantu becinga ngetekhnoloji kwiindlela zomthombo ovulekileyo (ukuba yinkqubo, hayi imveliso, imalunga nokulawula utshintsho, ukungafikeleli kwisiphelo), owona mthombo uvulekileyo ungcono.
Imibutho iya kuba nomnqweno wokusebenza nge-OpenStreetMap, kwaye abanye baya kuyifumana indlela. Ngelixa iilayisensi ziya kuqhubeka nokunciphisa imibutho yoluntu ukuba ithathe inxaxheba, abanye baya kulungisa kwaye baqale ukudibanisa i-OSM ekusebenzeni kwabo. Abanethamsanqa baya kufumana ukuqinisekiswa kwamagqwetha abo ukuba basebenze ne-OSM ngqo. Kwimeko yamathamsanqa amancinci, i-OSM iyakusetyenziswa njengomsonto oqhelekileyo ukugcina iimephu zihlaziywa… 🙂.
I-Boudlesss iya kudibanisa iitekhnoloji ezingumthombo ovulekileyo kuyo I-OpenGeo Suite, isenza kube lula ngakumbi ukuqalisa ngeenkqubo zeshishini ze-geospatial. Kulungile oko kwakulula ukusukela U-Eddie sele eyichazile, kodwa nam ndinezizathu zam.